Maxkamadda Sare Ee Kanada oo Xukuntay in Edbinta Caruurta Loo isticmali Karo Xoog Macquul ah
Dood dheer oo ku saabsan edbinta caruurta oo in mudo ah hortaalay maxkamadaha Kanada ayaa ay maanta Maxkamada Sare ee Kanada soo afjartay ka dib markii ay soo saartay go’aankii ugu danbeeyay ee doodan. Doodan ayaa waxa ay ku saabsanayd xaqa ay waalidka iyo macalimiintu u leeyihiin in ay ubadka gacan ku edbin karaan iyo in kale.
Halkan ka daawo go'aankii Maxkamada Canada
Sabata keentay qadiyadan
Qadiydan ayaa waxa ay ku bilaabantay markii koox u dooda xuquuqda ciyaalka iyo dhaliinyaradu ay ka codsadeen maxkamadaha Kanada in ay buriyaan qodab ka midda sharciga Kanada oo u fasaxayay waalidka iyo macalimiinta in markii ay baahi timaado ay edbinta caruurta u isticmaali karaan xoog macquul ah. Qodobkaas oo ah qodobka 43 ee qaanuunka ciqaabta ee Kanada ayaa waxa uu macalimiinta iyo waalidkaba u ogolaanayay in ay isticmaali karaan xoog macquul ah hadii ay rabaan in ay toosiyaan anshax xummada ciyaaalka ay masuulka ka yihiin.
Ururkan xuquuda ciyaalka u dooda oo la yidhaa “The Canadian Foundation for Children, Youth and the Law” ayaa iyagu maxkamadaha kaga hor dooday in garaacista caruurtu ay ka hor imanayso xuquuda ciyaalku ay ku leeyihiin mujtamaca. Mujtamacu waa in ay caruurta ula dhaqmaan sida ay ula dhaqmaan dadka waaweeyn. Garaacida qofka wayni waa danbi mujtamaca dhexdiida sidaas oo kale waa in ay garaacista caruurtu noqotaa danbi ayay kaga hor doodeen maxkamadaha wadankan.
Wasaarada cadaalada ee Kanada, ururo waalidiintu leeyihiin iyo ururada macalimiinta ayaa waxa ay iyagu ku doodayeen in sharcigan sidiisa loo daayo oo aan la taaban, sababtu bay yidhaahdeen hadii sharcigan la buriyo waxa dhici doonta in waalid caruurtooda la doonayay wanaag ay noqdaan danbiiyayaal. Waxa kaloo ay keenaysaa in macalmiintu aanay awood u yeelan doonin in caruurta edabta daran ee fasaladooda ku jirta ay edbiyaan. Waxa kale oo ay keeni kartaa ayay ku doodeen (macalimiintu) in caruurta isku laynaysa iskuulka hortiisa aanu macalinka arkayaa awood u yeelanayn in uu kala qabto, waayo waxa uu ka baqayaa in caruurtaasi ay ku soo oogaan dacwada ah in uu faraha ula tagay. Taas oo bay yidhaahdeen mushkilad xaga qaanuunka ah u keeni karta macalinka.
Go’aankii Maxkamada racfaaanka Onatrio
Maxkamada Racfaanka ee gobolka Ontario ayaa January 2002 aragtidan waafaqday waxaanay xukuntay in uu qodobkani waafaqasnayahay dustuurka Kanada. Xukunkaa maxkamada racfaanka ah ka dib waxa ay ururkan caruurta u doodaa racfaan u qaateen Maxkamada Sare ee Kanada taas oo maanta soo saartay xukunkii ugu danabeeyay ee doodan.
Go’aankii ugu Danbeeyay
Lix xaakim oo ka mida xaakimiinta maxkamada sare ee Kanada ayaa ogolaaday in qodobkani uuna ka hor imanayn dastuurka Kanada marka ay sadexna ay go’aamiyeen in uu khilaafsanyahay dastuurka wadanka. Maxkamadu waxa ay xukuntay in xoog loo isticmaali karo edbinta caruurta da’doodu u dhaxayso 12-14, laakiin waxa ay sheegtay in xoogaasi uu noqdo mid macquul ah.
Waxa ay danbi ka dhigeen in caruurta lagu garaaco SUUN (belt) iwm. Sidaas oo kaleeto waxa ay sheegeen in aan la aqbali karin in caruurta madaxa lagaga dhufto dhirbaaxo xoogan, feedh, iwm.
Isku soo duub oo sharcigani waxa uu suggay xaqa uu u leeyahay waalidku in uu caruurtiisa edbiyo. Laakiin waxa uu xadeeyay xaqaas. Waalidka Soomaaliyeed ee wadankan ku dhaqanina waa in ay ogaadaan xaqaa isla markaana ay la socdaan xuduudkaa aanay dhaafi karin ee sharcigani dhigay si aanay danbiilayaal u noqon isla markaana aanay caruurtoodu gacantooda uga bixin.
CILMI BAARIS: CARRUURTA LABADA LUQADOOD KU HADLA
RedNova News : Children Raised Bilingually May Be Smarter More....
Faafin: SomaliTalk.com | Jan 30, 2004
AABBE SOOMAALIYEED OO 18 SANO LAGU XAKUMAY DHIMASHADII GABADHIISA AWGEED
Maxkamad ku taal Minnesota ayaa waxay khamiistii (Jan 29, 2003) xabsi gaaraya 18 sano iyo sagaal bilood ku xakuntay Said Moussa Gouleed oo 35-jir ah dhimashadii gabadhiisii 6-da toddob aad jirtey awgeed.
Waxaa maxkamada laga akhriyey saddex warqadood oo lagu taageerayey Saciid Muuse, warqadahaas oo muujinaya in uu Saciid Muuse yahay nin wanaagsan. [Warkaan oo faahfaahsan oo Ingriisi ah: PioneerPress]
WARKII HORE EE SACIID MUUSE IYO DHIMASHADII GABADHIISA KA AKHRI HALKAN...